ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ SEK, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဆွီဒင်ခရိုနာ, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — SEK ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် ဆွီဒင်ခရိုနာ, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,01 SEK ဆွီဒင်ခရိုနာ
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/SEK ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и ဆွီဒင်ခရိုနာ (SEK). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
ဆွီဒင်ခရိုနာ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို SEK) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် ဆွီဒင်.
10 1 471,25
507356,24
100 14 712,48
200 29 424,96
500 73 562,41
1000 147 124,82
2000 294 249,64
5000 735 624,10
10000 1 471 248,20
200002942 496,40
500007356 241,00
ငွေကြေးက ISO code ကို SEK
ဒင်္ဂါးပြား 1, 2, 5, 10 SEK
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ 20, 50, 100, 200, 500, 1000 SEK
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.035 s.